Axmed Fiqi oo weerar ku qaaday Farmaajo kadib wareysigii saameynta lahaa - Caasimada Online
Home Warar Axmed Fiqi oo weerar ku qaaday Farmaajo kadib wareysigii saameynta lahaa
Axmed Fiqi oo weerar ku qaaday Farmaajo kadib wareysigii saameynta lahaa
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan wararkeena hore ku sheegnay Madaxeynaha JFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareysi uu bixiyay kaga hadlay qorsheyaasha horumarineed ay ku tallaabsatay DFS muddadii la soo dhaafay.
Waxa uu wareysigiisa kaga hadlay caqabadaha jira, xiriirka laamaha dowladda iyo arrimaha ay muhiimka tahay in loo iftiimiyo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan heshiiskii dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in uu waxqabadkiisa ku saleeyey dhaqan siyaasadeed oo mideynaya shacabka Soomaaliyeed kaas oo ka madax bannaan dano shakhsiyadeed, eex iyo qabyaaladda oo uu sheegay in ay yihiin cudurrada wiiqay dowladnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu adkeeyey Madaxbannaanida iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliya, isagoona sheegay in xiriir iyo heshiis kasta ay la galeen caalamka uu ku salaysnaa soo celinta magaca Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo sare u qaadista maqaamka ay ku leedahay dunida.
Wareysiga Madaxweynaha oo aad u dheeraa ayaa waxaa siyaabo kala duwan u dhaliilay Xildhibaan iyo Siyaasiyiin ka tirsan Dowlada kuwaa oo aragtiyo is dhaafsan ka bixiyay haddalka Madaxweynaha.
Xildhibaan Axmed Fiqi ayaa kamid ah Xildhibaanada dhaliisha ka muujiyay Wareysiga Madaxweynaha isagoo cabiraaya aragtidiisa ayaa waxa uu ka qoray qoraal dheer.
Hoos ka akhri qoraalka Xildhibaan Axmed Fiqi uu ka sameeyay Wareysiga dheeraa ee Madaxweyne Farmaajo
Hon. Axmed Macalin Fiqi